Codsiga of technology inta jeer variable CMN kombaresarada hawada fur inta jeer variable ka bedeli kartaa xawaaraha qoqobada goan sida ay isticmaalka hawada in ay dhacdo qaaca cadaadiska deggan, taas oo ka dhigaysa kombaresarada hawada soo saaro oo kaliya awoodda hawada looga baahan yahay ka. Ujeedada keydinta tamarta, sidaas waxaa lagu gaari karaa iyo tamarta badbaadiyey ka badan qiimaha kombaresarada hawada laftiisa. awood hufan laabtay barakac ee hawadda ka soo noqnoqoshada variable isku dari kartaa iyadoo hawada ...
Codsiga of technology inta jeer variable
CMN kombaresarada hawada fur inta jeer variable ka bedeli kartaa xawaaraha qoqobada goan sida ay isticmaalka hawada in ay dhacdo qaaca cadaadiska deggan, taas oo ka dhigaysa kombaresarada hawada soo saaro oo kaliya awoodda hawada looga baahan yahay ka. Ujeedada keydinta tamarta, sidaas waxaa lagu gaari karaa iyo tamarta badbaadiyey ka badan qiimaha kombaresarada hawada laftiisa.
korontada soo noqoto hufan
barakaca ee hawadda ka soo noqnoqoshada variable isku dari kartaa taagdarro hawada si fiican si looga fogaado khasaare ku yimaada awoodda dejinta gebi ahaanba. cadaadiska 0.2MPa waa la dhimay iyo waxa ay taasi mishiinka mooyee tamar 14% si toos ah.
set cadaadis aan loo aabo yeelin, iyo sii sahayda cadaadis joogto ah
Mashiinka dhergi karaan goob cadaadiska by users gudahood 0.4-1.2MPa (Fiiro gaar ah: cadaadiska ugu badnaan la xaqiijin doonaa marka iibka mashiinka) iyo qaybta mashiinka had iyo jeer ku hayaa sahayda hawada cadaadis joogto ah ± 0.01MPa ah. Marka isticmaalka hawada kordhay, unit mishiinka hagaajin doonaa xawaaraha qoqobada si toos ah; marka isticmaalka hawada hoos, unit mishiinka hoos u dhigi doontaa xawaaraha qoqobada si toos ah si ay u sii siin cadaadiska nidaamka joogto ah.
hawlgalka More kalsoonaan karo
Bilawga jilicsan ee inta jeer variable ka hortagtaa saamaynta Roobka xoogga iyo fogaado saameynta farsamoyaqaanka ka mashiinka laftiisa. Waxaa jira contactor lahayn, free of korontada failure xiriir iyo qaliinka waa ka xasilloon oo lagu kalsoonaan karo.
beegyada uu Farsamada ee soo noqnoqoshada variable fur saliid micro kombaresarada hawada ee CMN / taxane AV
Next: CM / G Taxanaha saliid preseeure dhexdhexaad fur free kombaresarada hawada
Air kombaresarada Waayo Oil Making Dhalo
Hand saar Air kombaresarada Waayo, Lub Oil
No Oil DIY Air kombaresarada
Oil mudaa Air kombaresarada
Oil Lubricated Air kombaresarada